Mogadishu Journal » Kenya oo qaaday tilaabo hor leh oo ku aadan Muranka badda
Mjournal :-Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay raadineyso heshiis ka baxsan maxkamadda Caalamiga ah ICJ ee Muranka badda Soomaaliya iyo Kenya usbuuc ka dib markii maxkamadda cadaaladda ee Qaramada Midoobay ay ogolaatay codsigeedii ahaa in dib loo dhigo kiiska.
Dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay raadin doonto in xal waara laga gaaro Muranka badda ka hor inta aan dib loo furin Maxkamada laba bil ka dib , islamarkaana ay socdaan dadaallo dhex dhexaadin ah.
Wasiirka arrimaha dibedda Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay ku howlan tahay sidii loo heli lahaa meel ka baxsan Maxkamadda si loo gaaro xal buuxa.
Dowladda ayay sheegtay in ay waddo Wadaxaajood kala duwan oo lagu soo afjarayo dhibaatooyinka ka dhashay muranka badda , iyadoo aan la aadin Maxkamadda.
“Xal waara waa in laga garaa Muranka, Waxaan door bidnay xalka wadahadalka. ” ayay tiri Monica Juma.
Iska horimaad kooban oo saakay ka dhacay Dhuusa-Mareeb